XOG XASAASI: KENYA oo ku dhawaaqday qorshe cusub oo kiiska badda ay ku baabi’ineyso!!! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG XASAASI: KENYA oo ku dhawaaqday qorshe cusub oo kiiska badda ay...
Nairobi (Halqaran.com) – Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday qorshe cusub oo ay ku doonayso inay ku xaliso kiiska muranka ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya kaasi oo ku saabsan badda Kenya muranka ay galisay.
Kiiskaan oo hadda uu horyaallo maxkamadda Cadaaladda Aduunka ee Hague haddana Kenya ma qabto Kalsooni buuxda oo ku aadan in arrintaasi Maxkamadda lagu dhameeyo.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya Monica Juma oo la hadashay Warbaahinta ayaa sheegtay inay rajo ka qabaan meel aan aheyn maxkamadda ICJ in lagu dhammeeyo muranka badda ee labada dal.
Tani waxa ay muujinaysa in Kenya aysan rabin maxkamadda inay u fariisato kiiska badda, xilli dhawaan codsi ka yimid Kenya muddo laba bilood ah maxkamadda dib ay u dhigtay dhageysiga kiiska Badda.
Ugu dambeyn, baarlamaanka Soomaaliya xubno ka mid ah ayaa iyana ku dhawaaqay in ay mooshin kaas la mid ah gudbinayaan marka uu furmo kalfadhiga Baarlamaanka 27ka Bishan September.
kiis badda ku baabi'neyso